Carlo Ancelotti Oo U Sharaxan In Uu Noqdo Badalka Massimiliano Allegri Ee Kooxda Juventus – Gool FM
(Juventus) 04 May 2018. Sida ay xaqiijinayaan wararka ka imaanaya gudaha dalka Italy Juventus ayaa qeyb kaga soo dhigatay Carlo Ancelotti liiska musharaxiinta ugu cad cad ay dooneyso in ay badal u noqdaan Allegri oo la filayo inuu baxo.
Carlo Ancelotti ayaa koox la’aan ahaa tan iyo markii uu isaga soo dhaqaaqay kooxda Bayern Munich, laakiin waxaa durbaba soo baxay warar ku aadan inuu dib ugu soo laaban doono magaalada Torino si uu noqdo badalka Allegri ee xili ciyaareedka soo aadan.
Ancelotti ayaa horey u soo leeliyay kooxda Bianconeri mudo dhan labo sano iyo bar, laakiin waxaa laga ceyriyay xagaagii 2001 ka dib markii uu ku guuldareystay inuu wax koob ku guuleysto.
Macalinkii hore kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Chelsea ama uu noqon doono madalka Arsène Wenger ee kooxda Arsenal.
Gabar wariye ah oo dil ugu hanjabtay daafaca Barcelona ee Samuel Umtiti (Muxuu ka sameeyay?)